Product Detail Iyo inoshanda musimboti yeiyo hydraulic jack ndeyekuti wrench inofambisa diki pisitoni kumusoro. Mafuta ari mutangi yemafuta anoyamwa muchikamu chezasi chepistoni diki kuburikidza nepombi yemafuta uye imwe-nzira vharuvhu. Kana wrench ikadzvanywa ichidzika pasi, iyo shoma pisitoni inovharirwa neiyo nzira-vharuvhu Mafuta ari muchikamu chezasi chepistoni diki anodzvanywa muchikamu chezasi chepistoni hombe kuburikidza neyemukati wedunhu mafuta uye imwe-nzira vharuvhu, uye chikamu chepazasi chepisto diki ...
Product Detail hydraulic station 1. Classic hydraulic control system, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza dhizaini dhizaini. 2.Rigorous process dhizaini inovimbisa yakanyanya simba kushandiswa. 3. Low ruzha, hapana leakage. 4. Izvo zvikamu zvikuru ndezvemarudzi akawanda mazita anozivikanwa, akachengeteka uye akatsiga system. 5.Compact chimiro, simba rine simba, yakakwira kushanda frequency. 6.Zvinhu zvese zvinoona zvakanaka kuchinjika uye chiyero chepamusoro chekutanga. Chengetedza Icho chakakosha chiyero kudzora oiri kusvibisa ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Hydraulic simba unit iri diki inosanganiswa hydraulic chiteshi. Iyo inoumbwa nemota, pombi yemafuta, yakavharidzirwa vharuvhu vharuvhu, yakazvimiririra vharuvhu vharuvhu, hydraulic vharuvhu uye zvakasiyana siyana hydraulic accessories (senge accumulator). Inofananidzwa neyakajairwa hydraulic chiteshi neiyo imwecheteyo musimboti, ine zvakanakira komputa dhizaini, diki vhoriyamu, kurema uremu, kukwirira kushanda, kuvimbika kuita, kutaridzika chitarisiko, hapana kuvuza uye kwakaderera mutengo. Parizvino, chigadzirwa ichi chine b ...
Chigadzirwa Chigadzirwa 1.Weirun ine yakakwana uye yesainzi manejimendi sisitimu yemota zvikamu uye zvikamu. Shandong weirun Auto Zvikamu Co, Ltd. inozivikanwa neindasitiri nekuda kwayo kuvimbika, simba uye chigadzirwa mhando. Gamuchirai shamwari kubva kumatunhu ese ekushanyira, kutungamira uye kutaurirana kwebhizinesi. Kambani yedu inyanzvi yekukweshera zvinhu yekugadzira kambani. Huru zvigadzirwa ndezvakasiyana marudzi emabhureki linings. Iyo yakakodzera kune ese marudzi e minitype, mwenje uye inorema-basa specia ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Iwo micheto yeparutivi rwemaoko ekutsigira epamusoro anotendeukira mukati kuita stiffeners, uye magumo awo akaumbwa kuita magiya uye meshed; iyo micheto yeparutivi rwepazasi rwekutsigira maoko anotendeukira kunze kuita iwo ekusimbisa mbabvu, uye magumo akaumbwa kuita magiya mavhiri uye meshed. 2.Principle ye scissor jack Iyo ...